Dowladda oo amar kasoo saartay koox diimeedka cusub ee Al-Saadicuun Bil-Xaq (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda oo amar kasoo saartay koox diimeedka cusub ee Al-Saadicuun Bil-Xaq (AKHRISO)
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay amar lagu mamnuucayo urur diimeedka cusub ee la magac baxay Al-Saadicuuna Bil-Xaq, kaas oo dhawaan looga dhawaaqay qeybo ka mid ah dalka Soomaaliya.
War-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska wasiirka awqaafta iyo diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xildhibaan Dr. Iimaan C/laahi Cali ayaa lagu sheegay in kooxdaasi gebi ahaan laga mamnuucay Soomaaliya.
Sidoo kale, waxaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay kooxdaasi u aqoonsatay inay tahay Takfiir gaalleeysiisa dadka muslimka ah islamarkaana faafinaysa waxyaabo aanay waafaqsanayn diinta Islaaamka.
Dhinaca kale, dowladda ayaa tilmaamtay in iyadoo tixgelineysa go’aanka culimadda Soomaaliyeed ay ka qaateen koox diimeedkaan cusub ee Al-Saadicuuna Bil-Xaq, ay kooxdaan ka mamnuucday dalka inaysan kasoo saari karin qoraalo, bayaanno maqal iyo muuqaal leh, islamarkaana aanay qaban karin shirar iyo muxaadarooyin lagu marin habaabinaayo dadka Soomaaliyeed.
Ugu dambeyn, dowladda Soomaaliya ayaa ku hanjabtay inay tallaabo sharci waafaqsan ka qaadi doonto koox diimeedkaan cusub, hadii ay ku dhaqaaqdo waxyaabaha looga digay inaysan dalka gudihiisa ka fullin karin.
Maamuladda Puntland iyo Somaliland ayaa hore tallaabooyin kala duwan ka qaaday kooxdaan kadib markii culumadda Soomaaliyeed ay qeylo dhaan iyo digniino kala duwan kasoo saareen mabaadi’da ay kooxdaan aaminsan yihiin.
Hoos ka aqriso war-saxaafadeedka ay dowladda soo saartay